Ngokubanzi, iimpahla ezinelaphu kunye nelaphu ziethe-ethe kwaye zithambile, kwaye kuya kuba yingxaki ngakumbi xa uhlamba. Nika ingqalelo kwiindawo ezininzi, kwaye iyakrwempa ukuba awulumkanga. Ngaba uyazi ukuhlamba ilaphu leleyisi yinto elungileyo? Ngoku makhe ndinazise ...
Luhlobo luni lwelaphu ngentambo? Uhlalutyo olukhulu lweentlobo ezintlanu zamalaphu eeleyisi
Ileyisi isetyenziswa ikakhulu njengesixhobo esincedisayo kwimpahla. Uninzi lwabathengi bakholelwa ukuba i-lace yintambo nje ecaleni kwempahla. Ngapha koko, i-lace lilaphu emva kokuhombisa. Ngethuba nje ilaphu lifakelwe, linokubalwa njengelace, kwaye emva koko ligqitywe ngentambo, kunye nokwakhiwa kwezi ...